Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa sheegay in loo baahan yahay in lala xisaabtamo Beesha Caalamk – STAR FM SOMALIA
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa sheegay in loo baahan yahay in lala xisaabtamo Beesha Caalamk
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa sheegay in loo baahan yahay in lala xisaabtamo Beesha Caalamka, isla markaana shaqada la qabanayo ay noqoto mid Soomaali kaligeed ay qabsato, Caalamkana uu gadaal ka joogo.
Axmed Madoobe oo ka hadlayay furitaankii shirka madasha wada tashiga ayaa sheegay in Beesha Caalamka lala xisaabtamo, isla markaana wax walba oo la qabanayo, iyaga gacanta loo geliyo.
“Waxaa loo baahan yahay in cid walba lala xisaabtamo, Beesha Caalamka lala xisaabtamo, War Caalamow waa na daba taagan yihiin anaga wax ha ina tusaan, anaga wax qabsaneyno, gacanta ha inoo geliyaan, amaano waa leenahay, waxaa laga yaabaa shaqada aan qabsaneyno in nala yiraahdo Beesha Caalamka maxay ka qabaan bal Nicholas Kay hala soo weydiiyo, iyaga sidaa yeelanaya, waa inaan mar dhow ka tagnaa Caalamka, wax kasta inaga oo Soomaali isku raacno, anaga wada tashigeeda aan gaarno, waxaa hubaal ah inay cid walba ku qasban tahay inay anaga na raacdo”ayuu yiri Madaxweynaha Jubbaland.
Sidoo kale Madaxweynaha Jubbaland ayaa ka hadlay doorashada sanadka 2016, waxaana uu sheegay inuu ku talinayo in Madaxda Maamul goboleedyada iyo mas’uuliyiinta dowladda federaalka inay danahooda gaarka ah ka hormariyaan danta Umadda Soomaaliyeed.
Shirka Madasha Wada tashiga doorashooyinka sanadka 2016 ayaa maanta la filayaa in la soo gaba gabeeyo, waxaana lagu wadaa in wada tashi loo aado gobolada, isla markaana laga doodo qaabka ugu wanaagsan ee doorasho ugu dhici karto Soomaaliya.
Ciidamada dawlada oo lawareegay deegaanka Wabxo ee gobalka galgaduud
Degmada Qoryooleey ee gobalka shabeelada hoose ayaa waxaa lagu qabtay saraakiil ka tirsan al-shabaab